သားကလေးဟာ ဂျော့ခ်ျဘုရ်ှကို မသိဘူး၊
သားကလေးဟာ ငရန်မန်ကန်းကို မသိဘူး၊
သားကလေးဟာ ဘစ်ခ်ဘင်န်သီအိုရီကို မသိဘူး၊
မြဲမြံစွာ အမြစ်တွယ်စေခဲ့တာ။ ။
၂၇ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by ညီလင်းသစ် au 27.12.07
ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးရယ် ဖခင်တယောက်ရဲ့ ခံစားချက် ကဗျာလေးရယ် … လိုက်လည်း လိုက်ဖက်ညီလှပါတယ်။
ဘာမှ နားမလည်သေးတဲ့ သားကလေးဟာ မိဘမေတ္တာကိုတော့ မသိစိတ်ထဲကနေ ခံစားတတ်မှာပါ … ။
သားကလေးသူရိယနဲ့တကွ ကိုညီလင်းသစ်တို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်ကြပါစေ … ။
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်းနဲ့ သားကလေး အပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာကို ခံစားမိလိုက်တယ်။
သိပ်ကို ငြိမ်းချမ်းပြီး အေးမြမှုပေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဒီ ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် စကားလုံး တွေက သေးနုပ်အရာမရောက် သလိုပဲ၊ ပြောချင်တာကို ရှာမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော့် အတွက်တော့ သားသမီး ရပြီးတဲ့ အချိန်ဟာ သူတင် မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော် လည်း အသစ်တဖန် မွေးဖွား ပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီလို့...
နောက်ဆုံး စာပိုဒ်လေးနဲ့ ဆင်ဆင် တူမယ် ထင်ပါရဲ့။
I like both photo n poem.I saw ur affection clearly.
I always wondered ..what his name will be. Now I found it!
ခုတော့ သားသားက တော်တော်များများ သိနေပြီနော် ... ပြက္ခဒိန်တွေလဲ တရွက်ပြီး တရွက် ဆုတ်ခဲ့ပေါ့။
သားသားရဲ့ လက်သီးဆုတ် သေးသေးလေးက အသဲယားစရာ ... ။
၅ နှစ်ကျော်အကြာမှာ ... ဒီကဗျာကို ဒုတိယမ္ပိပြန်ဖတ်ပြီး ဒုတိယမ္ပိ မန့်သွားပါတယ် ကိုညီလင်းရေ ... ။
ပထမအကြိမ် ဖတ်တုန်းက ကွန်မန့် မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး..။
အခု ကွန်မန့်ပေးဖို့လည်း စကားတွေဆွံ့အနေတယ်။
အဲ့လက်ကလေး ခုဆို ၅ နှစ်ကျော်ပြီ :)
ပုံထဲမှာ သားသားက ဖေဖေ့လက်ချောင်းလေး တစ်ချောင်းထဲကိုသာ ဆုတ်ကိုင်ထားနိုင်သေးပေမယ့် အဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ထဲက သားသားက
ဖေဖေ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားခဲ့တာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိပါ ကိုညီရေ..
Angel, နှစ်ခါပြန်ကွန်မန့်ပေးတဲ့ မမေ၊ m, hninhnin, Adora etc, ညီမလေးရွှေအိမ်စည်၊ အစ်မမြသွေး... ...
ကဗျာလေးကို လာအားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်၊ ဟုတ်တယ်ဗျာ..၊ အခုဆိုရင် အဲဒီလက်သီးဆုပ်ကလေးတောင် အတော်လေးကို ကြီးလာနေပြီ..၊း) အချိန်တွေကုန်တာ အရမ်း မြန်တာပဲ...။
အဲဒီ့လက်သီးဆုပ်ကလေးနဲ့ တွေ့ချင်တယ်...း)
လက်သီးဆုပ်ကလေးက အခုဆို အတော်ကြီးလာလို့ တွေ့ဖြစ်ရင် ညီမလေး မှတ်မိပါ့မလားပဲ...။း)